Magaalooyin aamin ah oo Sugan oo Gaadiidka Dadweynaha | RayHaber | raillynews
HomeDUNIDAAmerica57 ColombiaMagaalooyin aamin ah oo Sugan oo Gaadiidka Dadweynuhu Leeyihiin
24 / 02 / 2020 57 Colombia, 91 Hindiya, America, Aasiya, DUNIDA, tareenka, GUUD, WADADA, KENTİÇİ Systems Rail, Nidaamyada Tire Wheels, Headline, Metro, taraamka
magaalooyin aamin ah oo waara oo gaadiidka dadweynaha lagu raaco
Dhaawacyada wadooyinka waa kuwa 10-aad ee sababa dhimashada guud ahaan waana laxiriira 90 milyan oo dhimasho sanadkasta, 1.3% khasaarahaan wadamada soo koraya. Qiyaastii 50 milyan oo qof ayaa ku dhaawacma sannad kasta waddooyinka adduunka.
Sidaa daraadeed, UITP iyo ICLEI (Dawladaha Hoose ee Deganaanshaha) waxay isu yimaadeen si ay u diyaariyaan warbixin ku saabsan sida badbaadada wadooyinka iyo gaadiidka dadweynaha ay ugu biirin karaan Yoolalka Horumarinta Wanaagsan iyagoo dadaal ugu jira magaalooyin waara oo waara.
Nabdoonaanta Wadooyinka iyo Yoolalka Horumarinta Waara
Ujeeddo gaar ah oo ah Hormarinta Joogtada ah (SDG) ayaa lagu daray Ajendayaasha 2030-ka, iyadoo la aqoonsanayo carqaladda ka hor imaaneysa dhaawacyada taraafikada waddooyinka dadaallada horumarineed. Bartilmaameedka ayaa ku baaqaya in 2020% dhimis loogu sameeyo dhimashada wadooyinka marka la gaaro 50. SDGs sidoo kale waxay qeexdaa xalalka dhibaatada nabadgelyada wadada ee magaalooyinka (SDG 11). SDG 11.2 waxay aqoonsan tahay muhiimadda ay leedahay helitaanka nidaam gaadiid oo ammaan ah oo waarta magaalada oo loogu talagalay dadka oo dhan, waxayna si gaar ah u tilmaamtaa "hagaajinta amniga wadada, gaar ahaan ballaarinta gaadiidka dadweynaha".
Qaabka 'Nidaamka Nabdoon' iyo istiraatiijiyadaha 'Vision Zero' waxaa si isdaba joog ah u adeegsada siyaasad dejiyayaasha amniga wadada. Habdhaqanadaasi waxay masuuliyada nabadgelyada wadooyinka ka rogaan kuwa isticmaala wadada gaar ahaan kuwa u xilsaaran howlaha kala duwan ee nidaamka gaadiidka. Ahmiyada la saarayaa waa wadooyinka, gawaarida iyo daneeyeyaasha iyadoo la adeegsanayo nidaamka gaadiidka wadada. Saraakiisha gaadiidka dadweynaha iyo wadayaasha waxay door muhiim ah ka ciyaari karaan Go'aanka xiga ee Ficilka, maadaama nidaamka gaadiidku uu muhiim yahay.
Sida Loogu tabaruco Amniga Gaadiidka Dadweynaha
UN Go'aanka Waxqabadka ee (2010-2020) iyo Ajandaha Qaramada Midoobay ee Qaramada Midoobay waxay qaadanayaan mabaadi'da Nidaamka Nabdoonaanta waxayna dhiirigelinayaan dhiirrigelinta iyo isticmaalka gaadiidka dadweynaha si ay gacan uga geystaan ​​xallinta dhibaatada amniga wadada. In kasta oo la caddeeyay in magaalooyinka leh gaadiid dadweyne aad u sareeya ay hoos u dhigeen dhimashada taraafikada badh, haddana doorka gaadiidku hadda waa la iska indhatiraa inta badan qorshaynta amniga wadooyinka Hoos-u-dhacan weyn ayaa la xidhiidha isticmaalka gaadiidka dadweynaha ee sareeya iyo horumarinta isku dhafan oo yareynaysa aaminaadda isticmaalka gaadiidka gaarka loo leeyahay.
Hawlaha loo qaatay qayb ka ah Go'aanka Cusub ee Waxqabadka ayaa sidoo kale saameyn ku yeelan doona sii jiritaanka kale, tusaale ahaan, bey'ad nabadgelyo leh oo loogu talagalay dadka lugaynaya iyo baaskiilleyda, iyo isticmaalka yar ee gaadiidka dadweynaha ayaa yareyn doona qiiqa CO2, kordhin doonta tayada hawada, iyo yareyn doonta ciriiriga. - waxayna ka caawisaa sidii loo kobcin lahaa dad firfircoon oo caafimaad qaba. Tusaale ahaan dhaqamada wanaagsan, Delhi Metro (Hindiya) waxay qaadaa 2,8 milyan oo rakaab ah maalintii, iyada oo lagu beddelayo 400.000 oo gawaarida wadada ah, lagana hortago 300.000 tan oo saliid ah oo la soo dejiyo sanadkii iyo 70 tan oo wasakhooba maalin walba. Gawaarida waxay keydisaa 32 daqiiqo safarkooda oo ilaa 135 dhimasho ah ayaa laga fogaadaa sanad walba.
Talaabooyinka loo qaadayo Magaalooyinka Nabdoon iyo Kuwa Sii Joogtada ah
Si loo yareeyo dhimashada wadooyinka iyo dhaawacyada halista ah, waxaa loo baahan yahay bartilmaameedsad cusub oo nabadgelyada waddooyinka ah oo Qaramada Midoobay laga sameeyo sanadka 2030. Maalgelinta gaadiidka dadweynaha ee kaabayaasha iyo adeegyada waxay bixiyaan fursad cusub oo lagu hubiyo in nabadgelyada waddooyinka ay si muuqata u soo jiidato sanduuqa ay mudan tahay.
Gaadiidka dadweynaha ee waarta ee Columbia
UITP waxay kala shaqeysaa Dowlada Qaranka Kolombiya heshiis isfaham ah (MoU) oo looga golleeyahay samaynta iyo horumarinta gaadiidka dadweynaha ee Kolombiya nidaam buuxa oo waara. Is-afgarad (20-ka Febraayo 2020) waxaa lagu saxiixay magaalada Stockholm. Wadashaqeynta UITP waxaa ka mid noqon doona isweydaarsiga macluumaadka iyo taakuleynta mashaariicda kor u qaadaya nabadgelyada iyo nabadgelyada waara.
Jarmalka Tareenada ayaa amar ku bixiyay Tareenada 23 ee Talgo si loogu dhoofiyo intercity
Unilever iyo WWF-Turkey la Green Dot dhigayaa All Sustainable
Iskaashiga Muhiimka ah ee Soodhaweynta Sare ee UTİKAD
Abaalmarin loogu talagalay "Gaadiidka Sustainable" iyo "Taariikhda Izmir" Mashruuc-weynaha Isku-duwidda ee Izmir